DAAWO:Somaliland oo bilad geesinimo ah siisay taliye isaga & ciidamadiisu ku sugan yihiin gudaha P/land
May 18, 2020 Mahad Jama 19
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta bilad geesinimo ah gudoonsiiyey 12 kamid ah saraakiisha ciidamada Malateriga Somaliland, kuwaas oo sagaal kamid ah ay ku sugnaayeen aqalka madaxtooyada oo lagu qabtay munaasibad lagu xusayey sanad guuradii 29-aad 18kii May oo ku beegan markii Somaliland ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991kii.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Somaliland ayaa ka hor xaadiriyey madaxweyne Muuse Biixi saraakiishani oo biladaha uu gudoonsiiyey.
Saraakiisha kale ee iyagu goobta ka maqnaa ayaa waxaa kamid ahaa taliyaha aaga bari ee ciidamada Somaliland Gen. Cali Barre Xuseen, taliyaha qaybta 12-aad Faysal Cabdi Bootaan iyo taliyaha guutooyinka madaxa banaan C/laahi Ibraahim Xasan oo haatan ku sugan deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag.
Xubnaha maqan ayaa waxaa biladahooda loogu dhiibay taliyaha ciidamada Malateriga Somaliland oo la sheegay in uu isagu gaadhsiin doono taliyaashaasi bilaha loogu maamuusay.
Deegaanka Yubbe ee gobolka Sanaag ayaa waxaa isku horfadhiya weli ciidamada Somaliland iyo Puntland, waxaana mararka qaarna ka dhacay dagaalo kala duwan oo dhex maray labada dhinac balse Somaliland ayaa hada abaal marisay taliyaha ciidamada Yubbe ee Somaliland kaas oo dagaal kala soo horjeeda Puntland.
Madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland and buy umahadsanyahay dhiirigelinta ciidamada cadawga kula diriraaya jiidaha hire inshaallah waala gaadhi doonaa xadka #jamhuriyada Somaliland at LA leedahay maamulku sheega muqdisho .
Waxaa xadka ka hadhay 40km insha Allah Marka covid19 lava baxo ayaa LA gaadhayaa
Yoocada yaa gaadhaya wll, ciidankee, dawladee , xadkee. Bal hada noo yara jilci warkaaga farxaddu kuugu jiro. Mahadsanid
Jaahil kan is leh is ka dhig Yoocada waxaan kugula talinayaa inaad is aaminto oo magac aad leedahay ku doodo. Magacayga calanka Jamhuuriyada Somaliland ayaa ii dul saaran. Cidna kuma siri kartid inaad Yoocada tahay. Fuleyahow. Kkk ook kkk
Wallaalayaal soomaalidu waa isku dhiig markaa ma fiicnaa walaalayal inaad garowe muquunisaan oo aad dowlad INI taagersan ka dhistaan
Imika walaalayaal ma awoodno inaan dagaal galno alshaabab iyo daacish baa dagaal kula jirnaa markaa iska qaata sool iyo sanaag oo a an sidaa isku cafino
Gabagabay maraysaa putland oo way sii liicaysaa inshallah xadkaanu gaadhaynaa anaguna
Ciidanka idoorku waxay dul fadhiyaan garowe uu hadii eebee idmahayo caasimada budhlayn ah.
Wax dhibaato ah lama gaadhsiinaayo shacabka marka degan garowe waxaa lava dhisayaa dowlad adag oo taabacsan jsl.
Xadkana waala soo xidhayaa inshallah
Salaan sare mujaahid.
Ninka magacaaga oo bilaa calan ah is yidhi copiyee waa ninka sita magaca @BOODHARI, isagaa ayaaa hawshaas sifiican u yaqaan oo waa asbaabihii ALLMARQAAN NEWS looga soo eryay.
LA SOCOD wcn!
Waa dad liita ee madaxa qabiil ka maray, war dowlad ay noqdaan iska daaye, qaa yurub jooga ayaa meel kasta la taagan ,war hana aqoonsanina hadaanba iscuneynaaye. waana xaqiiq, hal qabiil kuma heshiin karo qaran, mana noqon karo, Hadda qorshaha dowladda federaalku wuxuu yahay, in ay ciidan geyso Buuhoodle, hadii ay nabad diideen, waa in ay markale qaxaan. waa xaqiiq wey imaaneysaa nin kasta oo qabsada.
Salaan safe mujaahid
Rebuplic of Somaliland
Way dhaqaaqdey wadamada geeska Africa ugu ammaanka fiican baykujirtaa iyo kuwa ciidamada fiicanba .
Markaad leedahay dowlad federalku ha weerarku oo ha qabsato buuhoodle ,soomalidaa Ku maahmaahda ,ninkaad kabihiisa ka toloneyso kabihiisa LA eegaa inay JSl LA gorgortan iska daaye 100m oo muqdisho ah bayna ka talin,oo ay amisom Ku ilaaliso lasoco jsland waxay haysaa ciidamo and utiro badan iyo qalabeysan buuhoodle inay qabato iska daayee muqdisho bay Somaliland qabsankartaa oo ay ka yagleeli kartaa dowlad ay 5state u shan yihii
1.Waa runtaa oo qabiil qaran ma noqon karo.Laakiin Axmadoow xamarba soo qabiil kama taliyo?Haah oo qabiil qayaxan baa xamar haysta oo waliba habeen iyo dharaar ku haya anagaa xamar leh.Reer soomaalilaan haddii ay yiraahdeen waxba ku darsan mayno dadkaas is cunaya illaa laga helo wax dhab ah oo lagu wada haeshiin karo waan la qabaa.Haddii ay xamar noqon lahayd guri nabadeed oo laga daynlahaa anagaa xamar leh soomaalilaan way soo dhawaan lahayd.Laakiin hadda xamar waxaa ka jira oo caan iyo caadi ka ah xasuuq an loo kala abyeelin oo joogto ah.Saas markuu xaalku yahay maxaa xamar lagu raacaa oo wanaaga?Habeen hore baan fiirsanayey niman da’ah oo qaar lagu sheegay professors oo leh xamar anagaa leh oo soomaali kama dhaxayso.Doodaas waxaad ka heli kartaa youtube-ka oo waxaa dooda qabtay ninka la yiraahdo Xassan Cadde.
2.Waxaad tiri waxaa xamar ka jirta dawlad federaal ah.War xamar xiligaan kama jirto dawlad la sheego oo tan hadda la sheegaa waa magac u yaal.I weydii sababata an saas u iri.Waxaa la yiri oo muuqata in xamar inteeda badan ay shabaab maamulaan oo ay shacabka iyo shaqaalahaba ka qaataan canshuuraha iyo lago kaloo baad ah.War meel ay dawladi xukunto miyaa jabhadi canshuuro ka qaadataa?Xaggee xamar ka hor lagu arkay dawlad iyo jabhadii la diriraysey oo hal magaalo wada dagan oo ay waliba jabhaddu ku gacan sarayso?
3.Ugu dambayn reer soomaalilaan waa dad soomaaliyeed,soomaalina meel ma kala aadayso.Wax garadka dhabtaa ee reer s.laan way ogyahiin in aysan soomaali kala maarmin.Ha fiirin siyaasiinta danahooda meesha ku fushanaya.Soomaali waa wada soomaali.One Somali One nation.
Axmed, dawladda 3 kun oo inan oo alshabaab ah ka adkaan weyday, dawladda 22 kun oo African gafuur culus waardiyeeyo, dawladda aan Afgooye iyo Balcad u safri karin, dawlada Puntland iyo Jubbaland aadi karin, dawlada 2da tuulo ee isku xiga diyaarad u kala raacda, dawladda Xamar dhagxaan ku kala xidhay, madaxweyne Hawiye ugu xiran Villada Wardhiigley, Dawladda Fahad Yaasiin (argagaxiso), walaal waa tee dawladdu, Allah maxaad riyootay, runta naftaada u sheeg, Afweyne oo Hargeisa dhexdeeda u joogeen 18kun oo askari 200 taangi, 150 abc, 1000 madfax, 10 diyaaradood, anana aan Jabhad nahay, Qori AK47 iyo Basuuka wadana ayey noo taag waayeen oo dagaal kasta ku jabeen, maanta 3 million oo hubeysan oo aqalka ugu yar yaalo 5 qori, ciidan tababaran oo 50 kun dhaafay, niyadda, dawladda, gurigayagi joogno, ayad Farmaajo oo inan la yaal ah, oo dhabta Hawiye ku fadhiya wax ka sugaysaa, war kaasi Hawiye soo dhaafi maayo, ee isu keen keen, aan wada hadallo ah, innaga ayaa is hurane, Xamar waxba haka sugin waana dhab, Ali Khaliif kamana aqoon badnin kamana siyaasinid, gidaarka ayuu soo taabtay, Allah ha xafidee
Hambalyo hambalyo hambalyo shacabka sharafta leh ee gobta reer Somaliland ciida 18may oo ah maalin kuweyn quluubta shacabka,madaxweyne muuse biixi mahadsanid sida aad u sharaftey Ciidamada Qaranka ee cadowga ku horfadhiya Min Saylac ilaa Garoowe Dusheeda,Ciidamada Qaranka waxaan leeyahay guushu way dhawdahay halkaa kawada afkana ciida u dara Cadawga, geediga wadaay, geediga wadaay, geediga wadaay, Somaliland 4ever, dhegeha ugu rida inaanay dhacayn midnimo dhegaha ugu rida.
Web kan beenta badan Yuube ciidanka puntland ayaa jooga goormaad maamul goboleedka waqooyi siisay war habaarka Nala dhaaf guul ciidamada puntland guul guul
Waxaas oo magacyo kala duwan ah labada iidoor ee isugu jiibinaya waa sOmalilander iyo Ahmed oo aan weliba aaminsanahay in uu qof keli ah yahay.
Waxay taasu muujinaysaa kalsooni darada qoladan ku habsatay iyo niyad jabka ba’an ee ka raacay cidla ciirsi laha ay ku irdhoobeen. Waa dar quus dhaafay oo faan iyo fatoosh isku tiilinaya. Waxaas oo baroor ah ay bog kasta ku camirayaan waa rajo beelka ku dhacay. Xataa website iyaga u furan oo ay ku dul ooyaan ma haystaan oo kuwa ay Hartigu leeyihiin ayay dukhsiga sidiisa ku dul meereystaan oo indha adayggooda gobtii ay u soo martiyeen ku sii jaa’ifeysanayaan. Horuu Seyidkeenii (Allaha Ka Raalli Noqdee) ugu tilmaamay in ay yihiin majnuun falan marka ay marqaamaan.
Runtoo aan muddo ku soo karbaashay ayaan halkan na wax yar ku shaabuugeynayaa. 30 sanadood ayuu ictiraaf doonkiinii marayaa oo maanta maalin aydun ka rajo xuntihiin wallaanay u jirin. Sagaashameeyadii ayay idiin ku dhawayd. Ictiraafkaasu Hartiga ayuu cagtooda hoosteeda ku jiraa ee bal kala soo baxa waa idinkaas. 30 years!
Reer Somaliland waxay weyddiinayaa ashahaadada Towxiidka ee ku qoran calanka Somaliland, xaggee bay jirtey markii Darwiishkii la dagaallamayey kaafirka Ingriiska? Xaggee bay jirtey 90kii sano ee kaafirku dhulka joogay? Ma jirey nin Beesha Dhexe ah oo aan ahayn Sh. Bashiir (arday darwiish) oo weligiis ku jihaadgalay kalimaddaas Towxiidka?
Tan kale, ‘mujaahidiinta’ SNM, awooweyaashood darajadaas cajiibka ah xaggee ka martay?
Meeshan Axmed yadii wey ku faro bateen. Anigu magac Keli ah ayaan weligay kusoo galaa. Kaas oo ah Ahmed. Berigii hore midh iyo labo Axmed oo kale ayaan arki jirey. Kuwaas oo ama Axmed ama Ahmed kusoo geli jirey. Ahmed ka kalena qoraalkayaga iyo fariintayada ama doodayada ayaa nalagu kala garan jirey. Imka’se meeshaan sidaan ka arko wixiiba wey isku dhex yaaceen oo lakala garan maayo. Sidaas la’ajligeed waa inaan magacan iska badalaa oon naaneysteydii yaraanteyda la’iigu yeedhi jirey u dhalan rogtaa. Waa Ahmed qaar idinka mid ahi u yaqaaniin Ahmed SNM ama Ahmed Qaldaan/Khaldaan oo idin leh imika laga bilaabo magaceygu waa Shiine.
Horta Alle ka cabsi miyaanad aqoonba? Maxaad had iyo jeer wax aanad hubin iskaga hadaaqdaa?
Inta aan ogahay anigu waxaan hayaa inaad tahay adigu qofka magacyada badan kusoo gala meelaha kala duwan. Waxaan kugu bartey Marqaan media adoo Cismaan Cawad kusoo geli jirey. Magacyada kale een xusuusto ee faraha badan eed kala badalan jirtey waxa ka mid ahaa, Cismaan, Maakhir, Taajka Maakhir, Cismaan Basbaas iyo inkaloon oloobey. Imika waxaad la baxdey Boodhari. Intaas oo dhamina waa intaan gartey. Kolkaas magacyo badanow, imisa magac oo kale ayaa kuu qarsoon oo kuu duugan ama aad meelahaas kale ku gashaa?
Mida kale adiga magac bedelka waan kugu ogaa, laakiinse Qabiil badalasho kugumaan ogeyn. Warsangeli ayaad ku dhaaratay inaad tahay ood Maakhir kasoo jeedo. Waxaanad kalood noo sheegtey inay Habar Yoonis ku dhashey ood tahay nin Ina Abtigayo ah. Aadbaad ugu doodi jirtey. Imikana waxaad isku sheegtaa Nin Majeerteen ah oo ay Hooyadiis Warsangeli tahay ayaydiisna Isaaq tahay.
Waar dadyahow bal ila arka ibtiladan. Hadaba Cismaanow sideen kuu aaminaa? Xagee laguugu soo hagaagaa? Ma dhaartaadii hore ayaa run aheyd mise taadii danbe? Alle ka cabsiba miyaanu jirin? Ma munaafaqnimaa lagu faanaa, mase gashaaba?
Qabiilku wax xun maaha oo Quraanka Illaahay ee Kariimka ah ayay ku taal oo waa sumad la isku garto. Kolkaas anigu waxaan garan waayay sababta ku kalifeysa Nin weyn inuu sanado dhan Qabiil aanu aheyn sheegto welibana Kuna dhaarto. Waxaa tidhi iyagaan ku difaacayay. Anigu taas marmarsiinyo macquul ah uma arko. Adoo Majeerteen ah ayaad Warsangeli difaaci kartaa. Anoo Isaaq ah ayaa Warsangeli difaaci kara. Qof walba oo cid kale ah ayaa difaaci kara. Sabab kugu kalifta ood Qabiil kale u sheegayo ayaabanan garaneyn.
Beenta intaas le’eg ee kaadibka kaa dhigtey maxaa kugu kalifey sxb?
Intayada ku garaneysaa ka quusanay inaanu run kaasoo jiidnee, bal isku yara sharax akhyaarta kale eenan ku garaneyn eed beenta ku beer laxow saneyso.
Uma maleynayo in uu jiro qabill iyo jilib somaaliyeed oo aan durin ha ugu badnaado kaan ka dhashay. Ugalama jeedo nacayb ama jacayl ama xaqiraad qabiil ama shaqsi. Ficil xun ciduu doono haka imaado waan kasoo horjeedaa. Argagixidana waxaan u nibcahay kuwa u dhashay puntland.